China Ọka Kasị Ọkụ Cob China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ọka Kasị Ọkụ Cob - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ọka Kasị Ọkụ Cob)
50W Ahịa nke Ahịa Kasị Mma Kwadoro Ogwe Osisi
Nke a na-eme ka anyanwụ na-acha ọkụ ọkụ ka a na-agbakwunye n'elu elu ma ọ bụ ogwe. Owuwu Nke Ahịa nke Ahịa dị mma iji dochie oriọna gas ma ọ bụ ọkụ ọkụ. Ma ọ bụghị ya, Nke a bụ Kapiri Mbara Igwe enwere ike iji ya mee ihe maka ọkụ ọkụ mpaghara, obere ụgbọala na-adọba ụgbọala, obere n'okporo ámá na alleyways...
Ịdị Mma Ka Mma: Nke a bụ 18w Corn Cob Bulb bụ 2000Lm na 5000K ìhè na ọkọlọtọ E27 Socket AC100 ~ 277V. Ogologo ogo 360: Nnukwu ọka anyị 18w na Cob Light Bulbs nwere nro na-agbanwe agbanwe, ọ dịghịkwa anwụ anwụ. Ogologo oge ndụ: Ọkụ a Cob Lam adịghị enwe nsogbu kpo oku dị ka ọkụ ọkụ ndị ọzọ, oriọna nke ọkụ na-egbukepụ...
Ọka Kasị Ọkụ Cob Ọka Kasị Ọkụ Ọkụ Kasị Ọkụ 150W Ọka Kasị Ọkụ Ọka Kasị Ọkụ Na-atụ Ọka Kasị Ọkụ Na-ekpuchi Ejiri Ọkụ Kasị Ọkụ Ọkụ Ọkụ Uk